Eyona projekthi ye-elektroniki kunye neeprojekthi zeerobhothi-Ikkaro
yokuqalisa >> IWindows
Siza kuzama ukufundisa i-elektroniki kunye neerobhothi kwi-DIY inyathelo ngenyathelo lesifundo. Eli lihlabathi ngokwalo. Ngokwenyani amazwe ahlukeneyo, i-elektroniki yedijithali, amandla, iirobhothi, i-mechatronics, njl. Amasimi amaninzi anemida efanayo.
Kule mihla, kuyo nayiphi na iprojekthi ye-DIY okanye i-fudge eyenziwe ekhaya, kubalulekile ukuba usebenzise icandelo le-elektroniki ukuze sizame ukufunda nokufundisa ngombane.
Siza kugxila kwiiprojekthi zokugqibela hayi ekuchazeni i-elektroniki ngokubanzi, yonke into iya kusebenza kakhulu. Ukuba ufuna ukugxila kufundo lwe-elektroniki jonga kwi izifundo zombane zasimahla
Ndiyathemba ukuba unomdla kwizihloko njengam.
Ukuchitha igumbi lokugcina ndifumana le panel indala yelanga esasiyisebenzisa kwiminyaka eyadlulayo endlwini ehlotyeni, xa umbane wawungafiki. Sinepaneli yelanga kunye neebhetri zemoto ezi-2 okanye ezi-3 kwaye ezinye (ukuba sinako) zeelori. Emini sibize iibhetri zemoto, kancinci kodwa ngokuthe chu. Kwaye sisebenzise okunye ukuba kukhanye kwi-12V nkqu nakumabonakude kwezi-12V.
Ku malunga ne Solar Arc ASI 16-2300. Ineeseli ezingama-35 kunye nobukhulu obuyi-1,225 mx 0,305m, okt 0,373625 m2
Ukuvavanywa ngo-Agasti phakathi kwe-14 kunye ne-15 emva kwemini ndifumene i-20V kunye ne-2A ubuninzi, ke sithetha ngamandla angama-40W P = V *
Kwaye ukuba sithatha i-40W kwi-0,37 m2, ilingana nokuthi kwi-1 square meter iya kuvelisa i-40 / 0,373625 = 107,06 W / m2.
Izifundo zasimahla ze-elektroniki
Ukuhlengahlengisa ulwazi kwiwebhu ndifumanise ukuba a Uchungechunge lwevidiyo yeYotube kwizixhobo zombane ukuba ndipapashe kwifomathi yezithuba (zaziyi "Virtual Tutorials", uthotho lwezifundo zokuqalisa nge-elektroniki endandizithanda kakhulu ngelo xesha) zisusiwe kwisitishi sishiya iiposti zingenakusebenziseka. Kuya kufuneka ubone inani leevidiyo, amakhonkco, iifayile kunye namanqaku athi anyamalale ngokuhamba kwexesha. Ukujonga phantse iminyaka eli-11 yebhlog, isixa solwazi esilahlekileyo kwi-Intanethi sisilo sokwenene.
Ukuze yonke into ilawulwe ngakumbi kwaye zonke iitutorials zokufunda zifumaneke ngombane ndibaqokelela kolu luhlu ukuba Ndiza kuhlaziya rhoqo, kokubini ukongeza izibonelelo ezitsha kunye nokususa ezinyamalalayo okanye ezingasenamdla.
Imultimeter yabenzi, iMastech MS8229
IiMultimeter ngabahlobo bethu abakhulu. Ukuba unguMenzi, uyathanda ukucofa okanye ufuna ukulungisa izixhobo kunye nezixhobo oza kuzifuna. Ewe, ukuba usebenzisa iArduino nayo.
Amaxesha amaninzi, ngakumbi abantu abaqala abazi ukuba yeyiphi imultimeter yokuthenga kwaye ukhethe esinexabiso eliphantsi kakhulu elivela kwitshayina okanye ivenkile, engaphantsi kwe- $ 10. Kodwa ezi zivame ukusilela kungekudala, ngakumbi ukuba siyayithanda into esiyenzayo kwaye siyisebenzisa kakhulu.
Ingcebiso yanamhlanje, yi-50 € multimeter ekunokwenzeka ukuba ayisiyoyona multimeter ibalaseleyo kolu luhlu lwamaxabiso, kodwa sikhethe yona ngenxa yemisebenzi emininzi eyongezelelweyo enayo. Sisixhobo esi-5 kwisi-1 eya kuvuyisa bonke abalandeli bokudibanisa nokudibanisa izinto. Kodwa musa ukwenza impazamo ukuba ayisiyiyo imvavanyo embi kwaye nge-50 euros sinegajethi okwethutyana.
Ukunikezelwa kwamandla okulula
La ukuhambisa umbane yinto esisiseko kuye nawuphi na umlandeli we iindibano zombane.
Le ndiyibonisayo kuwe yenziwe ngezinto ezimbalwa kakhulu, ezinye zaphinda zaphinda zenziwa. Idityaniswe kwimizuzu embalwa, kwaye ikuvumela ukuba ufumane umbane phakathi kwe-3 kunye ne-34 volts, (ngaphezulu okanye ngaphantsi).
Ungazenza njani izibane zikaKitt (Imoto entle)
Molo, enkosi kakhulu ngokusifunda. Ngeli xesha ndiza kukubonisa isenzo esasibonisa kakhulu kwaye sibonakala. Uninzi lwezenzo lubonwa kuphela ngezixhobo zokulinganisa, oku kuyabonakala ngee-LED.
Cinga ngomboniso osuka kwiminyaka yoo-80s ngokunqunyulwa kwamapolisa, umbaleki ophambili kwezemidlalo kunye nemoto engakholelekiyo enezikhanyiso ezingaqhelekanga ngaphambili, kuba yayiluluthotho olo. Ikati, imoto emnandi
Ngoku makhe sibone indlela yokwenza izibane zeKitt, imoto emnandi ngee-LED ukuze ukwazi ukuyisebenzisa kwimoto yakho okanye ekhaya. Njengesilumkiso akunzima konke konke, apha e-Ikkaro sikubonisa ukuba ungayenza njani usebenzisa imali encinci kwaye ngexeshana elifutshane. Ndiyanqwena uyayithanda.
Uyenza njani iSwitched Source +5, +12, -12 kwiiprojekthi ezizayo ngeDVD
Mholo. Eli linqaku lam lokuqala. Kwaye ukubona ukuba abanye abahleli babonisa izinto ezinomdla kakhulu, ndicinga ukuba kububulumko ukucacisa ukuba siyaqonda ukuba ayizizo zonke iingcali kwiindawo ezithile zobunjineli. Ngale nto kwaye siyabulela kwinto yokuba iiprojekthi ezigqibeleleyo zizayo, siza kuqala ngazo isixhobo esiya kusindisa i-euro ezimbalwa zokurisayikilisha, sinciphise ngaphandle kokushiya ikhaya.
Uluvo lwazalwa kuba ndathenga iDVD enexabiso eliphantsi (engaphantsi kwe- € 35) kodwa isebenza kakuhle iinyanga ezintathu kwaye ngaphandle kwayo iyajika ithi "Hayi idiski", le yingxaki edibeneyo yekhadi elinengcinga, nangona yidijithali ngokupheleleyo, akukho lula ukuyilungisa, ke ayisebenzi. Ukucinga ngenye imini yokuziqhelanisa apho ndifuna khona umthombo omkhulu kune-3 Amp, ndikhumbule iDVD kwaye nantsi ukwakhiwa kwayo. Ndiyanqwena uyayithanda.
Siza kuqala ngokwazi ukuba yeyiphi na into esiza kuyisebenzisa, yonke into ivela emfanekisweni, ngaphandle komlawuli kunye nomlungisi, uya kubona ukuba isetyenziselwa ntoni.
Siza kuthatha i-disassembly kwaye siyisuse yonke i-screws esecaleni, akunzima ukuyifumana, kuba iveziwe, nanku umfanekiso.